2 Musharrax oo isku magac ah ayaa u taagan doorashada madaxweynaha - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, GETTY IMAGES / FACEBOOK
Labada musharrax ayaa kala ah rag iyo dumar
Labo ka mid ah musharraxiinta doorashada madaxtinnimada ee bisha soo socota ka dhici doonta dalka Ukraine ayaa isla wadaaga hal magac oo ah Tymoshenko, dabcan shuruudaha kalena way ka siman yihiin.
Siyaasiyiintan ay magacyadooda isku midka yihiin ayaa walaac laga qabaa iney jahwareer ku ridaan dadka codadkooda ka dhiibanaya doorashada, kuwaasoo qaarkood codkooda u siin kara si aysan hubin.
Musharraxiintan indhaha warbaahinta soo jiitay ayaa kala ah nin iyo haweeney, waxayna dad badan oo ku nool dunida la yaabeen sida ay magacyadoodu isugu ekaadeen xilli ay labadooduba doonayaan iney madaxweyne ka noqdaan waddankaas.
Mareykanka oo malaayiin doolar siinaya Ukraine
Hoggaamiyaha fallaagada bariga Ukraine oo qarax lagu dilay
Yuriy Volodymyrovich Tymoshenko waa xildhibaan aan magac weyn ku lahayn siyaasadda Ukraine halka gabadha magaciisa la wadata ee Yulia Volodymyrivna Tymoshenko ay tahay siyaasiyad caan ah oo horay Ra'iisul wasaare uga soo noqotay Ukraine.
Waxaa si weyn looga shaki qabaa in dadka doonaya iney ra'iisul wasaarihii hore u codeeyaan ay ku khaldamaan magaca uu wato siyaasigan, sidaasna uu codad badan ku helo.
Yulia Volodymyrivna Tymoshenko waxay horay Ra'iisul wasaare uga soo noqotay Ukraine
Hase ahaatee wuxuu isagu sheegay in magaciisa uu yahay kii uu lahaa ilaa markii uu dhashay isla markaana uu gabadha uga horreeya ku dhawaaqista musharraxnimada madaxweynaha.
"Bogeyga Facebook ayaan 2 sano ka hor ku shaaciyay musharraxnimadeyda, xilligaasna waxay aad uga horreysay wakhtigii ay iyada ku dhawaaqday musharraxnimadeeda, aniga ayaana guuleysan doona", ayuu yirdh Yuriy.
Yuriy Volodymyrovich Tymoshenko wuxuu sheegay in magaciisa uu yahay kii loo bixiyay markii uu dhashay
2 milyan iyo bar lacagta Ukraine ah oo u dhiganta $92,000 oo dollar ayaa laga qaaday 44 musharrax oo tartanka usoo istaagay.
Dhammaan siyaasiyiintaas ayaa sidoo kale kasoo baxay shuruudaha kale ee ay ka mid yihiin in qofka madaxweynaha noqonaya uu yahay Muwaadin, da'diisu ka sarreyso 35 sano, ku hadla luuqadda Ukraine, 10-kii sano ee ugu dambeysayna ku noolaa dalka gudihiisa.
Lacagtan ayaa loo celin doonaa mid ka mid ah labada musharrax ee isugu soo harta tartanka, isla markaana xilka looga guuleysto.